အံ့သြစွာဖြင့် မသိခဲ့တာက အာအိချိခရိုင်က ဂျပန်မှာ နံပါတ်တစ် ဘုရားကျောင်းတွေ များတဲ့ ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ခရိုင်တွင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ရုပ်ပွားတော်နဲ့ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကို မြင်နိုင်တဲ့ နေရာတွေ များစွာ ရှိတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်က အဲဒီထဲမှ အဲဒီအရွယ်အစားက မထင်မှတ်တဲ့ အံ့သြရလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ ဘုရားကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
၁ ။ တိုးဂန်းဘုရားကျောင်း နာဂိုယာဘုရားကြီး
နာဂိုယာမြို့၊ ချိတာနဲအပိုင်း၊ ပင်မဘုရားကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ဆဲတိုးရှူးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း ( တိုးဂန်းဘုရားကျောင်း ) ဖြစ်တယ်။ အိုဒါနိုဘူနာကစစ်သေနာပတိ ရဲ့ ညီတော် အိုဒါနိုဘူယူခိ က ဖခင် နိုဘူစီဒဲရဲ့ ဘဝကူးပြောင်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဘုရားကျောင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီး ဖွင့်လှစ်တာက တန်းဘွန်းကာလလို့ ပြောကြတယ်။
ဘုရားကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းကလေးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းဆိုင်နှင့် ကြီးမားတဲ့ လူနေအဆောက်အဦး၊ တက္ကသိုလ်တွေရှိတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ( နာဂိုယာဘုရားကြီး ) က အဲဒီလို မြုိ့လေးထဲမှာ ဘွားကနဲပေါ်ထွက်လာတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။
ဒီဘုရားကြီးရဲ့ အမြင့် ၁၀ မီတာ၊ ပုလ္လင်အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၅ မီတာရှိပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၇ ခုနှစ်အချိန်အခါက ဒီလိုမျိုး အရောင်မဟုတ်ပေမယ့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး အစိမ်းရောင် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ပုလ္လင်မှာ ဆင် ၁၀ ကောင် နှင့် ဘုန်းကြီး၊ သမင်တွေက ရုပ်ပွားတော်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသလို ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
အရွယ်စားကို ကြည့်ရှုရင်း တစ်ကိုယ်လုံး အစိမ်းရောင်ရဲ့ စွမ်းအားတွေက ထင်ထားတာထက် ပိုပါတယ်။ ရှေ့ မှာ ရပ်ကြည့်လိုက်ရင် အမှတ်မထင် နောက်ဆုတ်သွားသလိုပါဘဲ။
တိုးဂန်းဘုရားကျောင်းက အခြားမှာလည်း ၊ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိလိုက်ရင်ရုံဖြင့် မကောင်းမှုတွေ ပြေပျောက်သွားတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ အချင်း ၁ မီတာ ရှိတဲ့ သစ်သားငါး ( ဂျပန် နံပါတ်တစ် အကြီးဆုံး ) နဲ့ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်နေ့ မှ ၅ ရက်နေ့ နှင့် မေလ ၇ ရက်နေ့၊ ၈ ရက်နေ့ မှာ ထုတ်ဖော်ပြသတဲ့ အရောင်သွေးစုံလင်တဲ့ ( နယ်မူရိဘန်းတန်း ) စတဲ့ ကြည့်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေး လျောက်သွားရင် အမျိုးမျိုးရှာတွေ့ လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
【နေရာ 】အာအိချိခရိုင် ၊ နာဂိုယာမြို့၊ ချိတနဲအပိုင်း၊ ယောစွတ်ယဒိုရိ ၂ - ၁၆
【ဝင်ကြေး 】အခမဲ့ ( နယ်မူရိဘန်းတန်းဝင်ကြေး ၁၀၀၀ ယန်း )
【အလုပ်ချိန် 】နွေရာသီ ၉း၀၀ မှ ၁၈း၀၀ ၊ ဆောင်းရာသီ ၉း၀၀ မှ ၁၇း၀၀
【လမ်းကြောင်】မြေအောက်ရထား တိုးစမ်းလိုင်း . မဲအိဂျောလိုင်း ( မိတိုယာမ ) ဘူတာ မှ ၅မိနစ် လမ်းလျှောက်
၂ ။ ဂျောဖူကုဘုရားကျောင်း ခါရိယာဒိုးဘုရားကြီး
အာအိချိခရိုင်၊ နိရှိအိုမြို့မှာရှိတဲ့ ဂျောဖူကုဘုရားကျောင်းက မိနမိုတိုနို မိစွတ်ခုနိက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင်ရဲ့ ဘဝကူးပြောင်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အတွက် တည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ ပြောကြပါတယ်။ နှစ် ၁၀၀၀ ကျော် သမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းဖြစ်တယ်။
အဲဒီ ဂျောဖူကုဘုရားကျောင်းတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ခါရိယာဒိုးဘုရားကြီးက ကြေးနီရောင် ဘိလပ်မြေဘုရားကြီးဖြစ်ပြီး ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ အမြင့် ၇ မီတာ ၊ ပုလ္လင်အပါအဝင် ၁၄ မီတာ ဖြစ်ပါတယ်
ရှောဝဘုရင်ရဲ့ နန်းတတ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်နှင့် တံငါသည်တွေ ဘေးကင်းရန်ဆုတောင်းခြင်း၊ ခင်ပွန်းသည် ဇာပနတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ၁၉၂၈ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ပင်လယ်ကို စိုက်ကြည့်နေသလို ကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူနေပြီး ဘေးကင်းရန် ဆုတောင်းနေပါတယ်။
ဦးခေါင်းတော်နောက်ပိုင်းမှ ကျောလယ်ထိ လွတ်တင်ထားတဲ့ အဝိုင်း ၂ ဝိုင်းကို ထပ်ပြီး တန်ဆာဆင်ထားတာက ( ရောင်ခြည်တော် ) လို့ ခေါ်ပြီး ဗုဒ္ဓနှင့် ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ အသဲနှလုံးမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အလင်းရောင်ခြည်တော်ကို သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။
ဒီလိုမျိုး ရောင်ခြည်တော် ထွက်နေတဲ့ ဘုရားကြီးက အရမ်းကို ဆန်းပြားလှပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို ကြည့်နိုင်တဲ့ ဝမ်းတွင်းလည်ပတ်ခြင်းလည်း လုပ်နိုင်ပြီး အထဲမှာ အရိမေတ္တေရဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို တည်ထားကိုးကွယ်ထားပါတယ်။
【နေရာ 】အာအိချိခရိုင်၊ အိရှိအိုမြို့၊ ခါရိယာဒိုးချော ထွက်ပေါက် ၅၀
【လမ်းကြောင်း 】မဲအိတဲစွတ် အိရှိအိုလိုင်း ၊ ဖူကုချိဘူတာ မှ အငှားကားဖြင့် ၁၀ မိနစ်
၃ ။ ရှူးရာခုပန်းခြံ ရှူးရာခုအန်းဘုရားကြီး
၁၉၂၇ ခုနှစ်၊ ရှောဝဘုရင်ရဲ့ ထိမ်းမြားခြင်း အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ရည်စူးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရှူးရာခုအန်းဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။ ဒီိလို ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။ နာဂိုယာရဲ့ နာမည်ကြီးအဖြစ်လည်း သိထားကြတဲ့ ( မိုရိဂူချီဇွတ်ခဲ ) ရဲ့ တီထွင်သူ ယာမတဆိုင်းခိရှိကြောင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့တာလို့ ပြောကြပါတယ်။
အမြင့် ၁၈.၇၉ မီတာ ရှိပြီး ဂျပန်ပထမဆုံး ( အတွင်းပိုင်းအခေါင်းပါတဲ့ ဘုရားကြီး ) အဖြစ်လည်း သိထားကြပါတယ်။
အနီးဆုံးဘူတာနဲ့ အနီးဝန်းကျင်လမ်းတွေက ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖူးမြင်နိုင်လောက်အောင် ကြီးမားပြီး ကမာကူရဘုရားကြီးထက် ကြီးမားပြီး သွားရောက်ဖူးမျှော်ဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။
【နေရာ 】အာအိချိခရိုင်၊ တိုးခိုင်းမြို့၊ အာရအိုချော နိရှိစာစမ ၂ - ၁
【အလုပ်ချိန် 】၉း၀၀ မှ ၂၁း၀၀
【ပိတ်ရက် 】တနင်္လာနေ့※ပွဲတော်ရက် ဖွင့်ပြီး နောက်ရက် ပိတ်သည်။
【လမ်းကြောင်】 မဲအိတဲစွတ်ရထား ( ရှူးရာခုအန်းဘူတာ ) မှ ၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်
၄ ။ ခိုးနန်းမြို့ ဟိုတဲအိဘုရားကြီး
ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ယှဉ်ရင် အနည်းငယ်ကြီးနေတဲ့ ဦးခေါင်းတော်ရှိပါတယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာတော်ဖြစ်နေတဲ့ ထူးခြားပြီး ပျော်ရွင်နေတဲ့ မျက်နှာတော်ရှိပါတယ်
ဒေသခံတွေက ( ဟိုတဲအိဘုရားကြီး )လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဒီဘုရားကြီးက တရုတ်အပ်စိုက်ပညာရှင် ဖြစ်တဲ့ ခို . မအဲဒဟိအဓနိုဘု ကြောင့် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဘိလပ်မြေ ဖြင့်ဆောက်လုပ်တဲ့ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။
ရှေးယခင်ကတည်းက ခန္ဓာကိုယ် အားနည်းပြီး မီတာခဲယာကုရှိဆေးကုသပေးတဲ့ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ မအဲဒရှိက ၄၃ နှစ်မှာ အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ မီတာခဲယာကုရှိဆေးကုသပေးတဲ့ ဘုရားသခင်ကို ဆောက်လုပ်ဖို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုကို စွန့် လွှတ်ပြီး မြေအနေအထားပြုပြင်ခြင်းနဲ့ ဘိလပ်မြေနယ်ခြင်းတွေကို အားလုံးလက်ဖြင့်လုပ်ရင် ရှောဝ ၂၉ နှစ် မတ်လ ၂၄ ရက် နေ့ မှ ရောင်တော်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
၁၈ မီတာအမြင့်ရှိပြီး ကတိသစ္စာပြုရင် ရောဂါနဲ့ မကောင်းတာတွေကို ပျောက်ကင်းစေပြီး ဥာဏ်သစ္စာလမ်းကို ညွှန်ပြပေးတယ်လို့ လည်း ပြောကြပါတယ်။
နောက်ထပ် ဒီနေရာက လက်ရှိမှာ သားဖြစ်သူက လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အရိုးအထူးကုဆေးခန်းကို တွဲဆက်ထားတဲ့ ပုံစံဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီး ထူးဆန်းတဲ့ နေအိမ်ပုံစံ ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။
ဘုရားကြီးရဲ့ ပတ်လည်မှာ နေအိမ်နဲ့ အဆောက်အဦးတွေ များစွာရှိပြီး နေအိမ်ခေါင်မိုးနဲ့ အဆောက်အဦးတွေကြားမှာ ရထားပေါ်မှ ဒီပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာတော်ကို ဖူးမျှော်နိုင်ပါတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အသိပညာတွေကို အမွေဆက်ခံပြီး တစ်မြို့လုံးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။
【နေရာ 】အာအိချိခရိုင်၊ ခိုးနန်းမြို့၊ ခိဂချော ဒိုင်းမွန်း ၁၃၂
【အလုပ်ချိန် 】 ပိတ်ရက်မရှိ
【လမ်းကြောင်း 】အီနုယာမလိုင်း ( ဟိုတဲအိဘူတာ ) ဆင်းပြီး ၁၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်
ဘယ်ဘုရားကြီးဖြစ်ဖြစ် လက်တွေ့ မျက်စိရှေ့မှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် စွမ်းအင်တွေက ကွဲပြားပါတယ်။ အဲဒီလိုအံ့မခန်းပြောင်မြောက်တဲ့ အရွယ်အစားတွေကို ဆက်ဆက် သွားရောက်ခံစားကြည့်ပါနော်။